Raw Dehydronandrolon vovoka Mpanamboatra & Mpamatsy - Pabanta
Rojo Dehydronandrolon vita amin'ny roja Dehydronandrolon dia fiaraha-miasa mahomby izay miteraka kalitao, mahavelona maharitra. Izany dia noho ny halavan'ny vanim-potoana lavitry ny zava-mahadomelina (manodidina ny 8 andro). Ny mpampiasa dia mitatitra ny fiantraikany mahasosotra, ary ny vokatra lehibe indrindra dia ny fihazonana ny rano.
Rojo Dehydronandrolon vovoka (2590-41-2) video
Rohe Dehydronandrolon vovoka (2590-41-2) Description
Ny pohea Dehydronandrolon roah dia singa manan-danja ho an'ny fampiasana (faslodex) ary, raha toa kosa ny teo aloha dia zava-mahadomelina manohitra ny nono-tratra novolavolain'ny orinasa AstraZeneca ary ity farany dia tsindrona steroidin'ny orinasa Organon noho ny fitarainan'ny klimakterika. Fiaraha-miasa mahomby izay miteraka kalitao, mahomby maharitra maharitra. Izany dia noho ny halaviran'ny fiainana an-davan'andro momba ny zava-mahadomelina. Ny mpampiasa dia mitatitra ny fiantraikany mahasosotra, ary ny vokatra lehibe indrindra dia ny fihazonana ny rano.
Rojo Dehydronandrolon rohe (2590-41-2) Specifications
Product Name Rojo Dehydronandrolon vovoka
Anarana simika 6-Dehydronandrolone acetate; 2590-41-2;Dehydronandrolon; Estra-4,6-dien-3-one 2590-41-2
molekiolan'ny Formula C20H26O3
molekiolan'ny Wvalo 314.425 g / mol
mitsonika Point -80 ° C
vayma- Point 457.4 ° C amin'ny 760 mmHg
Application Rojo Dehydronandrolon vita amin'ny roja Dehydronandrolon dia fiaraha-miasa mahomby izay miteraka kalitao, mahavelona maharitra. Izany dia noho ny halavan'ny vanim-potoana lavitry ny zava-mahadomelina (manodidina ny 8 andro). Ny mpampiasa dia mitatitra ny fiantraikany mahasosotra, ary ny vokatra lehibe indrindra dia ny fihazonana ny rano.